Ethiopia:Wayyaaneen waan jettu laalaa. Waraanni NS keessatti deemaa turee fi jiru waraana mataa isaanii tahuu nutti himaa jiru. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEthiopia:Wayyaaneen waan jettu laalaa. Waraanni NS keessatti deemaa turee fi jiru waraana mataa isaanii tahuu nutti himaa jiru.
Ethiopia: Wayyaaneen waan jettu laalaa. Waraanni NS keessatti deemaa turee fi jiru waraana mataa isaanii tahuu nutti himaa jiru.
Ethiopia: “Mootummaan Naannoo Tigraay Tigroota fayyaa qaban hunda hidhachiisuu qaba. Lafa keenya eebbifamtuu namticha Finfinnee kan sheexanaa fi Waaqa-hin beeynee tahe san irraa eeguu qaba. Wanti Naannoo Soomaalee keessatti tahaa jiru Abiyoot (Dr. Abiyy)f akeekkachiisa haa tahu. Bifa fedheenuu Tigraayiin tuffachuun balaa guddaa qabaata.”
Ethiopia: Tigrai State government should arm every able body Tigrawai to defend our holy and blessed land from the blasphemous and Satan incarnate man in Addis Ababa. We have seen what is going on in Somali State, warning to Abiyot, undermining Tigrai in any shape of form will have catastrophic consequences!!!
Ethiopia: Dhaamsa Tigirinyaadhaan barreeffamee akka walii share godhamu dhaamamaa jiru tokko argeeara. Namoonni keenya gariinis barruu Tigirinyaa san argitanii akkan hiikuuf natti ergaa turtan. Ergaan barruu sanii cuunfaatti akka armaan gadiiti:
– Mootummaan Shaabiyaa dhimma Tigraay irratti bakka lamatti wal qooduu dubbata. Gamni tokko warra Tigraayiin lafa irraa balleessina jedhu kan Pirezdaanticha Isaayaas Afawarqiitiin hogganamuu dha jedha. Gamni lammaffaan ammoo Ajajaa Humna Ittisa Eertiraa Mejer jeneraal Efreem Yisaaqiin kan hogganamu tahuu dubbata. Efreem Yisaaq ”TPLF yoo tahe alee ummata Tigraay maaliif tuqna, ummanni maal nu godhe” jechuun Isaayaasiin walitti bu’aniiru jedha.
Ethiopia- Humni waraana Itoophiyaa ajaja MM Dr. Abiyy Ahmediin akka daangaa irraa ka’ee of duuba deebi’u ajajame ajaja fudhachuu didee daangaa irratti cichee jiraachuu dubbata. Kun kan taheef walii galtee mootummoota lamaanii keessatti TPLF hin mariisiifamne qurrama jedhuun jaja MM dabarsu kamuu kuffisuuf murteen jiraachuu agarsiisa, kunis mallattoo tokko jedha. Gama Eertiraatiin kan jiru humni DEMHIT jedhamu 11,000 tahu walii galtee araaraa kan Tigraayiin kophxeessu kana hin fudhanne jedha.
– Obbo Lammaa fi Warqineen ABO Daawud Ibsaa kan lafa Oromiyaa irra caalaa toyatee jiru mohachuu waan dadhabaniif kadhatanii biyyatti galchuuf Asmaraa deemani, Oromiyaan ABO harka jirti malee garee Lammaa fi Abiyyi harka miti waan taheef karaan Abiyyi jalqabe hin milkaahu dhaamsa jedhus barruun kun of keessaa qaba.
Ethiopia: (ABO waggaa meeqaaf dhabamsiifneerra jechuun ummata Oromoo abdii kutachiisaa bahan har’a ”ABOn Oromiyaa irra caalaa toyateera” yeroo jedhan jaraaf akka oduu abdachisaatti, hoggansa haaraa MMf ammoo akka balaa guddaatti ibsaa jiru. Isheen kun ammoo akka itti Oromoo isa tokko qabatanii isa kaan ittiin dhahan san tahuu isheeti. Dur OPDO qabatanii waggaa 27 ABO irratti duulaa bahan. Dandeettii OPDOn yeroo sanitti hin qabne kennaniifii ol tuulanii dirqiin ummata irratti fe’aa turan. Har’a ammoo garagalchii waan saniitti jiraachuu jaraatu barruu kana keessaan ciinca’a.)